Vana vemuAmerica Vanorangarira Zuva reMauto Akafa Achidzivirira Nyika Yavo, reMemorial Day
Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, vachiisa maruva paguva regamba risingazivikanwi kuArlington Cemetary pazuva reMemorial Day.
Zvizvarwa zveAmerica neMuvhuro zvacherechedza zuva rekuremekedza mauto akafa achirwira nyika iyi, reMemorial Day, vakuru vezvehutano vachikukurudzira vanhu kuti vachengetedze mitemo inodzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19, vachiti chirwere ichi hachisati chakwanisa kumiswa kupararira.
Mutungamiri weAmerica VaDonald Trump nemudzimai wavo Amai Melania Trump, mangwanani vashanyira marinda eArlington Cemetary vakanoisa maruwa paguva regamba risingazivikanwe kumarinda anovigwa magamba.
Mutewedzeri wemutungamiri wenyika VaMike Pence nemudzimai wavo, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika VaMark Esper, pamwe nevamwe vakuru vemauto ndevamwe vanga varipowo pachiitiko ichi.
Mushure, VaTrump vazoenda kudunhu reBaltimore muMaryland uko vataura kuvanhu vaungana pamarinda eFort McHenry National Monument and Historic Shrine.
Vachitaura vari kuBaltimore, VaTump vatenda zviuru nezviuru zvemauto zvavati zviri pamberi mukudzivirira nyika yeAmerica kubva kuchirwere che coronavirus.
Ukuwo, vachamirira bato reDemocratic Party, VaJoe Biden, vaendawo kudunhu reDelaware Memorial Bridge Veteran’s Park, uko vaisawo maruva.
Matunhu akasiyanasiyana ane mitambo yakasiyanawo yaakaronga kuita pazuva rekurangarira magamba iri.
Semuenzaniso, mudunhu reCalifornia, ndege dzehondo dzanga dzichitarisirwa kubhururuka dzichipa ruremekedzo kune vari kushanda muboka rezvehutano munguva ino yeCovid-19.
Vakarwa hondo vanotendererawo maguta mazhinji emunyika yose vari pamidhudhudhu vachirangarira vamwe vavo vakafa.
Mamwe makore ose adarika aya veruzhinji vaicherechedza zuva iri vachigocha pamwe nekunwa, asi nekuda kwekuti gore rino kune chirwere cheCovid-19, mhuri zhinji dzanga dzichingozvitandadza dziri mudzimba.
Mumwe wevanhu vatandara semhuri vari pamba pavo ndaVaTakawira Kapikinyu, vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland, avo vanoti vapedzawo zuvao rose vari pamba vachitandarawo nemhuri yavo.
VaKapikinyu vanotiwo vanoshushikana zvikuru vachienzanisa mabatirwo anoitwa magamba emuAmerica nemagamba ekumusha, vachiti hurumende kumusha inonyanyotungamidza nyaya dzezvematongerwo enyika zvekuti magamba anocherechedzwa ndevakarwa vari kumapato eZanu PF neZapu chete.
Hurukuro naVaTakawira Kapikinyu